क्यानको कार्यसमितिमा भयो यस्तो परिवर्तन, के होला अब क्रिकेटको भविष्य ? « Etajakhabar
क्यानको कार्यसमितिमा भयो यस्तो परिवर्तन, के होला अब क्रिकेटको भविष्य ?
प्रकाशित मिति : १७ असार २०७७, बुधबार १२:१३
काठमाडौं, १७ असार । नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आफु मातहतमा गठन भएका विभिन्न समितीलाई पुर्णता दिएको छ । जसमा नयाँ कार्यसमिती आएपछि बसको पहिलो बोर्ड बैठकले गठन गरेका चार वटा कमिटीमा केहि सदस्यहरु थपेको छ ।
क्यानले लामोसमयको विचारपछि चार वटा कमिटीमा सदस्यहरु थपेको छ । क्यान भित्र र बाहिर रहेका क्रिकेटलाई सहयोग गर्नेब्यक्तिहरुलाई क्यानले यसपटक विभिन्न समितीमा ल्याएको छ । जसमा मिडिया कमिटीमा संयोजक सचिव अशोकनाथ प्याकुरेल थिए भने अब पत्रकार भानु सिग्देललाई सदस्यमा राखिएको छ ।
यता राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् राखेपले भने छुम्बी लामा र धर्मराज गिरीलाई नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको कार्यसमिति सदस्यका लागि सिफारिस गरेको छ । परिषद्बाट क्यानमा दुई सदस्य मनोनयन गर्ने प्रावधानअनुरुप लामा र गिरीलाई राखेपले सिफारिस गरेको हो ।
लामा र गिरीको मनोनयनसँगै क्यान कार्यसमितिले नौ महिनापछि पूर्णता पाएको छ । दुवै जनालाई राखेपले मङ्गलबार आधिकारिक पत्र प्रदान गरेको छ । लामाले आफूले लामो समयसम्म दिएको योगदानको राखेपले कदर गरेको बताउनुभयो । उहाँले क्रिकेट विकासमा आफू लागिपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
लामासित क्यानका पूर्वअध्यक्ष टङ्क आङबुहाङको टोलीमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । उहाँले यसअघि क्यानमा चिफ अपरेटिङ अफिसरका रूपमा काम गरिसक्नुभएको छ । लामा पोखरा प्रिमियर लिग (पिपीएल)को आयोजक क्वीन्स इभेन्टका प्रबन्ध निर्देशकसमेत हुनुहुन्छ ।
यस्तै फाइनान्स कमिटीमा संयोजक रोशनकुमार सिंह थिए भने माधव कर्माचार्य, दुर्गाराज पाठकलाई सदस्यमा राखिएको छ । माधव र दुर्गा दुबै क्यानको केन्द्रिय सदस्य हुन् ।
यस्तै टेक्निकल समितीमा संञ्जयराज सिंह यसअघि संयोजक तोकिएको थियो भने अब सदस्यमा कञ्चनपुर जिल्लाका अध्यक्ष तथा क्यानका केन्द्रिय सदस्य विरेन्द्रबहादुर चन्द, यस्तै अर्का केन्द्रिय सदस्य अमितविर पाण्डे, पूर्व मुख्य प्रशिक्षक अरुनकुमार अर्याल, अम्पायर सञ्जय गुरुङलाई राखिएको छ ।
यस्तै प्रतियोगिता आयोजना समितीको संयोजकमा प्रशान्तविक्रम मल्ल थिए भने सदस्यमा केन्द्रिय सदस्यह दाउद अन्सारी, रिशीराम गौतम, विक्रम विष्ट र कैलाश विष्टलाई थपिएको छ ।
क्यानले निकट भविष्यमा अरुपनि थप कमिटी बनाउने योजना बनाएको छ । जसमा अझै केहि ब्यक्तिहरुलाई राख्ने योजना बनाएको छ । कोरोनाका कारण अहिले खेलकुद सम्बन्धि केही कार्यक्रम सञ्चालन भएका छैनन् । खेलाडीहरु अहिले घरमै बसिरहेका छन् । प्रशिक्षण समेत गर्न नपाएका खेलाडी फुर्सदिला भएका छन् ।